Umakhi weDrayivu yeDrayivu, Umhlinzeki, Okwenziwayo kwefekthri, izinciphisi zezibungu, amabhokisi ama-worm, amabhokisi wamagiya aseplanethi, izinciphisi zejubane, okuguquguqukayo, ama-helical gear, amagiya wentsimbi ye-sprial, amabhokisi wamagiya ezolimo, amagiya kagandaganda, amagiya weloli, u-gearbox wesibungu
Noma ngabe umkhiqizo wakho uyahamba, ujika, wakhe, ubumbe, uphakamise, umbe noma uthuthe, ungathembela kwimikhiqizo ye-hzpt hydraulic ukuhlinzeka ngokusebenza okudingekayo ukuze uhlale uncintisana. I-hzpt izibophezele ngokungagunci ebuholini bayo ekusetshenzisweni kwamaselula nezimboni, okwenza i-hzpt ibe ngomunye wabaphakeli abathandwayo bezinhlelo zokubacindezela, izingxenye, izilawuli kanye nezixazululo zobunjiniyela emhlabeni jikelele.
amaphampu we-hzpt, ama-motors, ukuhanjiswa, ama-valve, amasilinda, izilawuli, ama-hoses kanye nezinsiza zinikeza inhlanganisela eyingqayizivele yetheknoloji ethembekile kanye nokwakhiwa okusha, okungahunyushwa ngqo ekusebenzeni okuthembekile nesikhathi esengeziwe sokusebenza. Noma ngabe udinga into eyodwa, isisombululo esenziwe ngokwezifiso, noma enye into ephakathi, i-hzpt inguzakwethu ongazikhethela izinhlelo zokusebenza zeselula nezimboni ezidinga ukusebenza kahle kuphela.
I-HYDRAULICS DRIVE- IMINCINCI HGJ2.54-100-46-17.5-ZPL
HYDRAULICS DRIVE- IMINININGWANE HNYJ2.53-30-150-12-ZP
UKUSHAYELA KWAMAHYDRAULICS- WINCHES HLYJ6-160-135-26-ZP
HYDRAULICS DRIVE- IMINYANGO IDJ23-10-30-14
I-HYDRAULICS DRIVE- IMINYANGO EMININGI HYJ3A-27.5-49-16-ZP
I-HYDRAULICS DRIVE- IMINYANGO IYJ2.54-100-90-17.5-ZP
A wokubacindezela drive uhlelo kuyidrayivu noma Ukudluliselwa system esebenzisa ingcindezi uketshezi wokubacindezela ukushayela imishini wokubacindezela. Igama elithi hydrostatic lisho ukudluliswa kwamandla okugeleza nengcindezi, hhayi kusuka ku- amandla kinetic kokugeleza.
Uhlelo lwe-hydraulic drive luqukethe izingxenye ezintathu: I-generator (isb futha wokubacindezela), Iqhutshwa yi imoto kagesi, umlilo injini noma i-windmill; ama-valve, okokuhlunga, ukubhobhoza njll. (ukuqondisa nokulawula uhlelo) imoto (isib motor wokubacindezela or isilinda wokubacindezela) ukushayela imishini.
Isimiso se-hydraulic drivehlela
Umthetho kaPascal kuyinto isisekelo wokubacindezela drive izinhlelo. Njengoba ingcindezi ohlelweni ifana, amandla anikezwa uketshezi kuzungeze ngakho-ke alingana nengcindezi × yendawo. Ngaleyo ndlela, i-piston encane izwa ngamandla amancane kanti ne-piston enkulu izwa ngamandla amakhulu.
Umgomo ofanayo usebenza kupompo wokubacindezela onomthamo omncane oshanelwe ocela okuncane i-torque, ihlanganiswe nomshini wokubacindezela onomthamo omkhulu oshanelwe onikeza i-torque enkulu. Ngaleyo ndlela kungakhiwa ukudluliswa okunesilinganiso esithile.
Iningi le-hydraulic drive systems lisebenzisa amasilinda wokubacindezela. Lapha kusetshenziswa isimiso esifanayo - i-torque encane ingadluliselwa kumandla amakhulu.
Ngokufinyiza uketshezi oluphakathi kwengxenye ye-generator nengxenye yezimoto, noma ngokusebenzisa amaphampu wokubacindezela kanye / noma ama-motors ngevolumu eshintshiwe eshintshekayo, isilinganiso sokudluliswa singashintshwa kalula. Uma kwenzeka kusetshenziswa ukuphamba, ukusebenza kahle kokudluliswa kunqunyelwe. Uma kwenzeka kusetshenziswa amaphampu nama-motors, ukusebenza kahle, kukhulu kakhulu. Eqinisweni, kuze kufike cishe ngo-1980, uhlelo lwe-hydraulic drive lwalungenakho ukuncintisana kwamanye amasistimu edrayivu.
Kulezi zinsuku, izinhlelo zokushayela ngogesi ezisebenzisa ama-servo-motors kagesi zingalawulwa ngendlela enhle kakhulu futhi zingancintisana kalula nezinhlelo ezijikelezayo ze-hydraulic drive. Amasilinda we-Hydraulic, empeleni, awanawo umncintiswano wamandla alinganayo. Kula masilinda, amasistimu wokubacindezela azohlala enentshisekelo futhi uma uhlelo olunjalo lutholakala, kulula futhi kunengqondo ukusebenzisa lolu hlelo ngamadrayivu ajikelezayo amasistimu okupholisa, nawo.
Ama-cylinders we-Hydraulic ) Ama-actuator ezisetshenziselwa ukunikeza amandla aqondile ngokushaya okuqondile. Amasilinda we-Hydraulic akwazi ukunika amandla okududula nokudonsa kwezigidi zamathani emethrikhi ngohlelo olulula lwe-hydraulic. Kusetshenziswa amasilinda wokubacindezela alula emishinini; lapha, isilinda siqukethe ivolumu engxenyeni yensimbi nge-plunger ecindezelwe kuyo futhi yafakwa ikhava. Ngokumpompa uketshezi lwe-hydraulic ngevolumu, i-plunger iphushelwa ngaphandle ngamandla engcindezi yendawo ye-plunger.
Amasilinda ayindida kakhulu anomzimba onesembozo sokuphela, a induku ye-piston, Futhi ikhanda lesilinda. Ngakolunye uhlangothi ngezansi, ngokwesibonelo, kuxhumeke kokukodwa clevis, kanti ngakolunye uhlangothi, induku ye-piston nayo ibonwa kusengaphambili nge-clevis eyodwa. Igobolondo lesilinda imvamisa linokuxhumeka kokubacindezela nhlangothi zombili; okungukuthi, ukuxhumana ohlangothini olungezansi nokuxhumeka ohlangothini lwekhanda lesilinda. Uma amafutha iphushelwa ngaphansi kwepiston, induku ye-piston iphushelwa ngaphandle futhi uwoyela obuphakathi kwepiston nekhanda lesilinda ubuyiselwa emuva ethangini likawoyela
Umdwebo wesifunda oyinhloko we iluphu evulekile futhi iluphu evaliwe uhlelo.
Imoto yokubacindezela inguzakwabo ojikelezayo we isilinda wokubacindezela. Ngokomqondo, imoto ye-hydraulic kufanele ishintshane ne- futha wokubacindezela, ngenxa yokuthi yenza umsebenzi ohlukile. Kodwa-ke, amaphampu amaningi wokubacindezela awakwazi ukusetshenziswa njengama-hydraulic motors ngoba awakwazi ukubuyiselwa emuva. Futhi, imoto yokubacindezela ivamise ukwakhelwa ingcindezi yokusebenza ezinhlangothini zombili zemoto. Omunye umehluko ukuthi imoto ingabuyiselwa emuva nge-valve eguqukayo.
Ingcindezi ohlelweni lwe-hydraulic ifana namandla kagesi asesistimeni sikagesi futhi isilinganiso sokugeleza koketshezi siyalingana nesikhathi samanje. Usayizi nesivinini sepompo kunquma isilinganiso sokugeleza, umthwalo emotweni ushintsha ingcindezi.